‘ए फलाना... लुतो लैजा’ - Baikalpikkhabar
नेपालका प्राचीन संस्कृतिअनुरुप साउन १ गते साँझ घर घरमा लुतो फाल्ने प्रचलन छ । लुतो फाल्ने संस्कृतिले जेनतेन निरन्तरता पाउँदै आए पनि विस्तारै त्यस क्रममा प्रयोग गरिने सामग्रीबारेको जानकारी नयाँ पुस्तामा खासै छैन ।
पछिल्ला समयमा लुतो फ्याँक्ने प्रचलन हराउँदै गए पनि केही धार्मिकस्थलमा सामाजिक रुपमै लुतो फ्याँक्ने संस्कृति मनाउने गरिएको छ ।
हरायो वनस्पतिको संरक्षण
लेखक भैरव अर्याल भन्छन्– कण्डारक राक्षस वनस्पतिप्रिय लाग्यो । लुतो फाल्न वा राक्षसको पूजा गर्न भलायोका पात, तिउरी, पानीसरो, देवीसरो, कुकुरडाइनुको लहरो, धसिङ्गरेका बोट, उन्यू जातको नागबेली, कुरिलो, सिउँडी, सिस्नु, जरै सहितको पानीअमला लगायतका विविध वनस्पति चाहिने भएकाले । पहिले पहिले पहाडतिर लुतो फाल्ने कामलाई उत्सवकै रूपमा मनाइन्थ्यो रे ! सामान्यतया असारमा रोपाइँ सकिने, रोपाइँ गर्दा हिलो र धमिलो पानीका कारण छालाको रोग लाग्न सक्ने भएकोले पनि साउने संक्रान्तिमा लुतो फाल्ने चलन बसेको बूढापाकाको भनाइ छ । लुतो फाल्ने परम्परा त जैविक विविधतासँग जोडिएको रहेछ । लुतो फाल्नकै लागि धसिङ्गरे, पानीसरो, देवीसरो, कुकुरडाइनु, पानीअमला, उन्यू जातको नागबेली, भलायो जस्ता वनस्पति जोगिने रहेछन् ।
लेखक भैरव अर्याल भन्छन्– लुतो पनि दुई किसिमका हुन्थे । एकथरीलाई लुतो मात्र भनिन्थ्यो भने अर्कोलाई ‘सुके–लुतो’ भनिन्थ्यो । सुके–लुतो औधी चिलाउने, जति कन्याए पनि चिलाई नमर्ने । मकैको खोया वा नङले कन्याउँदा पनि बरु छाला दरफरिएर घाउ हुने, चिलाउन नछाड्ने । सुके–लुतो प्रायः काछ र गुप्ताङ्गमा बढी आउने । यसै कारण यसले लाजमर्दो पाथ्र्यो । मान्छेहरू भएको ठाउँमा कन्याउनु भएन, नकन्याए बसिनसक्नु पार्ने ! अनि उठेर एकान्तमा कन्याउनुपर्ने ।
पूजा गरिसकेपछि बलिरहेका अगुल्टा लिएर आँगनको पर्खालमा चढ्यो, र पल्लो गाउँका बासिन्दामध्ये कसैको नाम ठूलो स्वरमा उच्चारण गरी ‘ए फलाना… लुतो लैजा’ भन्यो । टोल–छिमेकमा नाम तोकेर लुतो पन्छाउने परम्पराले त्यो समयमा तनाव पनि पैदा गथ्र्यो । अघिपछि औधी मिलेर बसेका वल्लो–पल्लो गाउँकाहरूबीच लुतो फाल्ने दिन भने केही तिक्तता छाउँथ्यो ।
शुक्रबार, ०१ साउन, २०७८, बिहानको ०७:४६ बजे